ကုမ္ပဏီနိဒါန်း - Ningbo YH Hydraulic စက်စက်ရုံ
ရေပိုက် Skiving စက်များ
ဟိုက်ဒရောလစ် Hose ညီလာခံ
ဟိုက်ဒရောလစ် fittings, ferrules, ရေပိုက်, စက်နှင့်ရေပိုက်အသင်းတော်များ၏တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူ။
Ningbo YH Hydraulic စက်စက်ရုံ Beilun port အတွက်နာမည်ကြီးသောအဆင်းလှသောမြို့, Ningbo အတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ YH Hydraulic တစ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်စက်တွေ crimping braided ရော်ဘာရေပိုက်, ရေပိုက် fittings, ရေပိုက် ferrules မြင့်မားဖိအားရေပိုက်အသင်းတော်များ, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများတဲ့အထူးပြုစက်ရုံ, စတာတွေဖြစ်ပါတယ်, YH နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအရည်အသွေးပိုကောင်းလိုက်စားအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်။ အရာပစ္စည်းများကိုထိန်းချုပ်ကျနော်တို့ဒါ
ရောင်းသူတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာကိုတင်ပို့နေကြသည်ကျော် 8 နှစ်များအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးရောင်းချခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသစ်စျေးကွက်ရှာဖွေစူးစမ်းအလားအလာဖောက်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရေးနှင့်ကောင်းစွာအမိန့်နှင့်အတူဖောက်သည််ထမ်းဆောင်နေသောအနေနဲ့အသိဉာဏ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကရှိသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ဖော်ရွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိခြင်းနှင့်ရေရှည်ကောင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဘို့ဖြစ်၏။
တိကျခိုင်မာစွာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု; ထိရောက်သောနှင့် Real-time ထောက်ခံမှု; ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကျေနပ်
ကျနော်တို့ကိုတိကျခိုင်မာစွာလေးရှုထောင့် (ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းထိန်းချုပ်မှု→ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထိန်းချုပ်မှု→ QC ဌာနထိန်းချုပ်မှု→ Logistic ဌာနထိန်းချုပ်မှု) ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်သေချာအားလုံးထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်မှုမပြုမီနဂိုအတိုင်းများမှာစေရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရှစ်ထစ်ရှိပါတယ်: ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှု; တူရိယာတွင်ခုံအပြောင်းအလဲနဲ့; CNC စက်အပြောင်းအလဲနဲ့; burrs နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှား; ဇင့်များတွင်လည်းကောင်း, နောက်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်စစ်ဆေးခြင်းကို; ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပေးအပ်။ ဘုံတှငျကြှနျုပျတို့စစ်ဆေးရေးစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်
တဦးတည်းအမိန့်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းလေးကြိမ်။ check လုပ်ထားညာဘက်အတိုင်းအတာနှင့်တောင်းဆိုချက်များကို၏ထုတ်ကုန်များလာမယ့်ခြေလှမ်းထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်။
တစ်ပါတ်ကိုတစ်ကြိမ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ QC ဌာနက၎င်းတို့၏ကောင်းသော function ကိုသေချာစေရန် CNC စက်တွေနဲ့အခြားပစ္စည်းကိရိယာများစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါထိရောက်သောနှင့် Real-time ထောက်ခံမှုဖောက်သည်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်း chatting tool ကို (Skype ကို) ကကရနိုင်က်ဘ်ဆိုက်၏အောက်ခြေတွင်အရာသည်မုသာ။ သို့မဟုတ်မည်သည့်ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စား, လိုအပ်ချက်များကို, ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်။ ချက်ချင်းအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါ်ဆိုခ 24 နာရီနေ့အဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပေါ်ပြသလူအပေါင်းတို့သည်မေးခွန်းများကိုနှင့်အဖြေကိုစုသိမ်းမည်။ တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကျေနပ်ဖွယ်လက်ခံပြဿနာများဖြေရှင်းရေးအပေါ်စောင့်ရှောက်လော့။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်မည်ကဲ့သို့ပညာရှင်ပီသစွာကျွန်တော်အစေခံကိုထိန်းချုပ်ပုံကိုတင်းကြပ်စွာနေပါစေမရှိ 100% ထုတ်ကုန်စုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များနှင့်ငါတို့အသိစိတ်ကုမ္ပဏီအာမခံနိုင်သည့်နောက်ပိုင်း-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့သုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရည်မှန်းချက်များနာခံအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို:
→ သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးမြင့်; ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
→အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်, စျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုကျေနပ်; ဖောက်သည်ဖို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး
→ Overstep သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ, တစ်ဦးထက်ပိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် increment ကုမ္ပဏီဖြစ်
မှကျင်းရှန်မြို့, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. သိကောင်းစရာများ , အသားပေးထုတ်ကုန်များ, မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
ကာဗွန်သံမဏိ Hydraulic Hose Fittings, Hose Crimping စက် , Hydraulic Hose End Fittings, Metric Pex ပိုက်သောကြေးဝါ Fittings , ဆီလျြော Hydraulic Hose , ကာဗွန်သံမဏိ Hydraulic Fittings , အားလုံးထုတ်ကုန်များ